Tichaona HomePod yekutengesa isingasviki mazana maviri euros? | Ndinobva mac
Mumavhiki mashoma apfuura takaona nhau dzakasiyana dzakanangana nePodPod. Pamberi pekuburitswa kwemhedzisiro yekota, zvakataurwa kuti kutengesa kwePambaPod kwaive kudzikira kupfuura zvaitarisirwa neApple uye zvichifungidzirwa kuti zvitoro zveApple zvakadzora odha.
Panguva imwecheteyo, runyerekupe rwekuwedzeredzwa mutengo. Iva sezvazvingaite, makwikwi eApple mune maspika ane anopfuura mhando imwe yemutauri. Mhando dzakadai seSonos dzine mutauri wekuburitsa kwemadhora mazana maviri. Pamwe Apple inofanirwa kufunga nezve kutora mutauri kubva mune iyi nhanho, kana ichida kuve nehunhu hwakanaka mune iri bhizinesi niche.
Isu tiri mune imwe nguva izere nerunyerekupe, mazuva mashoma mushure meApple WWDC, uko zvisiri zvakajairika kuburitsa software, asi kunze kwegore rapfuura, vakapa nhau. Imwe nguva apo Apple inopa nhau dzakakosha inyaya yaGunyana, kwainozadzikisa iyo nyowani iPhone ine mubatsiri. Chaizvoizvo, panguva ino, zvese zvatinazvo mishumo ine ruzivo rwushoma, saka hatigone kusimbisa kana kuramba chero ruzivo.
Kana isu tichifananidza iyo HomePod neakanaka maspika, huwandu hwevatauri hunobva kubva ku50 euros, to € 230, kana tikatarisa huwandu hwevatauri veiyo Echo brand. Ichi chingave chimwe chezvikonzero zvekuunza mutauri we € 200 pamusika.
Kana mutauri wezvemutengo wakaderera waburitswa, hazvisi pachena kuti ichave iine yeApple brand kana kuti pamwe neBeats brand. Chokwadi, mutauri mutsva uyu anenge aine AirPlay 2, asi ichave isina Siri.
Kunyangwe Apple yaigona kunge ichifunga nezve mutauri we € 200 kana kuti zvakapesana, mutauri wemhando iri nani pane iyo HomePod. Ivo vanofunga nenzira iyi, vanofunga kuti mutengo / mhando chiyero chePambaPod yakanaka, uye nekudaro, vanogona kugadzira mutauri wemhando yepamusoro, pamutengo wemakwikwi kwazvo.
Chero nzira, zvinoita kunge vakomana muCupertino vari kufunga nezvechimwe chinhu, icho chatinozoona tichiona kudonha kunotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Tichaona HomePod yekutengesa isingasviki mazana maviri euros?